Video: Colts.com na-eme Mgbasa Ozi Vidiyo maka Ndị Nkwado thezọ Ziri Ezi! | Martech Zone
Na Mọnde, Nọmba 13, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Pat zipụrụ vidiyo taa maka ezinụlọ Colts nke saịtị m chere na ọ dị ịtụnanya - na-ebugharị iru Colts.com, myIndianaFootball.com na MyColts.net. Ha mepụtara ọmarịcha vidiyo na-agbakwunye mgbasa ozi mara mma nke ọma. Oge ọ bụla mmadụ tinyere nke a na saịtị ha, onye mgbasa ozi ha na-erute ndị na-ege ntị ọhụrụ. Emere nke ọma.
Pat na-ajụkwa ajụjụ dị mkpa… na nde 7.5 na-eleta Colts.com kwa afọ, mana 280,000 ọbịa na ama egwuregwu - kedu otu kachasị mkpa? Ọ bụrụ na ọ ruru ego, enwere m obi ike na ndị ọbịa 7.5 na-azụta ngwongwo metụtara Colts nwere ike karịa ahịa tiketi na ndị otu. Agbanyeghị, ịnwere ike ịrụ ụka na isi oche ahụ bụ mkpọtụ na egwuregwu ahụ ma bụrụkwa, na-agbasokarị ndị na-eche otu egwuregwu ga-emefu egwuregwu ọ bụla.
Aga m eso ndị na-azụ tiketi, Pat! Echere m na ọtụtụ n’ime ndị folks ahụ na-anọ ogologo oge, site na ezigbo oge. Agaghị m ewepụ mmetụta ị na-enwe na-eto eto igwe mmadụ ahụ site na ndị ọbịa 7.5 nde. Ọ bụ ezigbo obi, uru bara uru n'ime mmekọrịta dị ogologo oge na ndị Fans gị.
Tags: echiche echichenyocha echichennyocha nyocha echicheinbound marketinginbound ahịa ohiainbound ahịa infographicinbound ahịa atụmatụnnyocha e merewordpress mumultidomain wordpress
Nov 13, 2007 na 8:47 AM
Kedu ihe bụ Brutus?
Bịa, Doug… na-eche n'èzí bun! (er, ámá egwuregwu) 🙂
Nov 13, 2007 na 9:01 AM
Hey! Ekwuru m na nde 7.5 bụ nnukwu ego na uru!